ဟော့ကင်းသည် Black Holes ထဲ၌ ဘာများရှိသည်ဆိုသည်ကို စိတ်ဝင်စားခဲ့ဖူးသည်။
Black Holes က တစ်စုံတစ်ရာကို ဝါးမြိုလျှင် ဝါးမြိုခံရသော အရာရာတို့သည် မည်သို့ဖြစ်သွားသနည်း ??
သူတို့သည် ပျက်စီးသွားကြပြီလား ?? (သို့မဟုတ်)
အခြားသော စကြဝဠာသို့ ရောက်သွားပြီလား ??
ထိုအကြောင်းအရာများအား ဟော့ကင်းသည် လွန်စွာ စိတ်ဝင်စားခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော် သူရယ်စရာ ပြောပြသည်မှာ သူသည် Black Holes ထဲ၌ ဘာများဖြစ်နေသည်ကို သိလိုသော်လည်း သူသည် Black Holes ထဲသို့ ခုန်ချရန် စဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါဟု ဟာသနှော၍ ပြောခဲ့ဖူးသည်။ ၎င်းမှာ အင်တာဗျုးတစ်ခု၌ ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Black Holes တို့သည် သူ့အဝန်းအဝိုင်းသို့ ရောက်လျှင် အားလုံးအား စွဲယူ၍ ချေမွပစ်နိုင်ကြောင်းကို ဟော့ကင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ဤဖွင့်ဆိုချက်ကို သူ၏ အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ဖြေဆိုခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းပြုနိုင်ပါသည်။
Sue: You say that it’s not known what eventually happens toablack hole and its contents. But I thought the theory was that whatever disappeared intoablack hole, including an astronaut, would eventually be recycled as Hawking radiation.
Stephen: The mass energy of the astronaut will be recycled as radiation sent out by the black hole. But astronaut himself, or even the particles of which he is made, won’t come out the black hole. So the question is, what happens to them? Do they get destroyed, or do they pass into another universe? That is something I would dearly like to know, not that I’m thinking of jumping intoablack hole.